Wararka - 2019 Glass -Tech Bandhiga Caalamiga ah ee Ilkaha & daaqadaha Mexico
2019 Glass -Tech International Door & Window Bandhigga Mexico
June 2019 Albaabada iyo daaqadaha Bandhiga Caalamiga ah ee Meksiko Meksiko iyo Windows MEXICO ayaa lagu qabtay Magaalada Meksiko. Bandhigga ayaa sidoo kale iftiimiya dhammaan gobollada Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika oo wuxuu bixiyaa dariiq ganacsi oo laba-geesood ah oo loogu talagalay warshadaha galaaska ee Mexico iyo waddammada ku xeeran illaa Koonfurta Ameerika. Kooxdayada 'FOEN' ee waaxda dibedda waxay muuqaal fiican ka heleen alaabada shirkadda ee dhowaan la soo saaray iyo xallinta teknolojiyada albaabka iyo daaqadda.
Fujian Fenan Aluminum Co., Ltd waxay soo bandhigtay nidaam u gaar ah albaabada iyo daaqadaha, oo ay kujirto hawo sare, biyo qabatin, kuleylka kuleylka, xaraashka dhawaaqa iyo waxqabadka kale ee aadka u iftiimaya, iyo sidoo kale kaneecada ka hortagga, xatooyada, xatooyada, iyo waxyaabo kale hawlo aad u xoog badan. Soo jiidatay durdur aan dhammaad lahayn oo soo bandhigayaal soo booqday oo isweydaarsaday fikradda. Waxaa ka mid ah, inaysan jirin marti sharaf sare oo sharaf leh oo aqoonsi heer sare ah siiya hal abuurnimada FOEN, kuna dhiirrigeliya FOEN inay sii waddo inay u sii wadato ruuxa hal-abuurnimada, inay wax badan ku biiriso horumarka xagga warshadaha albaabka & daaqadda.
Foen waa 32 sano tikniyoolajiyada & qibradeedka, waxaan aasaasey 1988 annagoo ah qeybiyaha astaamaha aluminium. Intii lagu jiray tobankii sano ee ugu horreeyay, waxaan galnay suuqa iyo khibrad xoog leh. Sannadkii 1998, Waxaa la aasaasay saldhigga ugu horreeya ee wax soosaarka FOEN steel steel ee Fuzhou City. Waxa la soo gabagabeeyey saldhigga soosaarka Fuqing Aluminium ee 2005. Sanadkii 2012, waxaan ku guuleysanay Shiinaha 20ka shirkadood ee alaabada aluminium leh, 2013, waxaan soo galnay qadka ugu weyn adduunka tooska ah ee tooska ah. Sanadkii 2014-kii, waxaa kaalinta koowaad galay 10-ka shirkadood ee Aluminium alaabada iibiya. Sanadka 2015, Samee machadka nidaamka daaqadda Smart. Sanadkii 2016, saldhigga wax soo saarka ee Got FOEN ee Waqooyiga si uu uga shaqeeyo. Sanadkii 2017, Nidaamka daaqadda FOEN ee Art Gellary ayaa la furay oo warshad aluminium Henan FOEN laga sameeyay. Sanadka 2018, waxaa naloo sharfay 500 oo shirkadood oo ugu qiimaha badan Shiinaha. Sannadkan saldhigyadeena saddexaad ee wax soo saarka aluminium ayaa socota.
Mustaqbalka, Waxaan FOEN, oo leh hal abuurka iyo horumarka tikniyoolajiyada waxsoosaarka, fikradaha maareyn heer sare ah oo caalami ah oo heer sare ah iyo kheyraad, Sii wad isbedelka suuqyada, si joogto ah u wanaajinta qanacsanaanta macaamiisha, ee horumarka joogtada ah ee shirkadda si loo helo dammaanad adag, Fujian Fenan Aluminum Co., Ltd waxay dejin doontaa heer caalami ah oo heer sare ah oo heer caalami ah.